Hydralazine HCL poopy (304-20-1) hplc≥98% | AASraw R & D Reagents
/ Products / R & D Reagents / Hydralazine HCL poids
SKU: 304-20-1. Sokajy: R & D Reagents
Ny AASraw dia miaraka amin'ny synthesis sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny hydralazine HCL (304-20-1), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Hydralazine HCL poids dia vasodilator izay miasa amin'ny fanalefahana ny hozatra ao anaty fantsakanao mba hanampiana azy ireo hanitatra (hanitatra). Mampihena ny tosidra izany ary mamela ny rà mandalo mora kokoa amin'ny lalan-dra sy ny arteria.
Hydralazine hydrochloride video vidéo
Hydralazine HCL poids ireo karazana fototra
Name: Hydralazine hydrochloride poids
Meny fitetezana 196.64
Hydralazine hydrochloride poids amin'ny fampiasana
Anarana iombonana amin'ny teny hongariana Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny hongariana Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny hongariana
Hydralazine HCL Endri-pihariana
Ny Hydralazine HCL dia ampiasaina mba hanasitranana ny tosidra ambony. Ny hydroloride hydrochloride poids dia ao anatin'ny kilasy iray misy fanafody antsoina hoe vasodilators. Miasa amin'ny fanalefahana ny fantson-dra izy mba hahafahan'ny rà mandalo mora kokoa amin'ny vatany.
Ny tosidra avo lenta dia toe-javatra mahazatra ary rehefa tsy voatsabo, dia mety miteraka fahasimbana ny atidoha, ny fo, ny ra, ny voa ary ny faritra hafa ao amin'ny vatana. Ny fahavoazana amin'ireny taova ireny dia mety miteraka aretim-po, aretim-po, tsy fahampiana fo, fikoropahana, tsy fahampian'ny voa, fahabangana amin'ny fahitana, ary olana hafa. Ankoatry ny fanafarana fanafody, ny fanovana ny fomba fiainan'ny zaza dia hanampy amin'ny fanaraha-maso ny tsindry azonao. Ireo fiovana ireo dia ahitana ny fihinanana sakafo tsy misy sigara sy sira, mihazona lanjany ara-pahasalamana, fampiasana farafaharatsiny 30 farafaharatsiny androany, fa tsy mifoka sigara, ary mampiasa alikaola.
Inona no atao hoe dosage Hydrocazine hydrochloride?
Hypertension amin'ny marary efa lehibe:
Manomboka ny fitsaboana amin'ny doka ambany ary mitombo tsikelikely amin'ny valin'ny marary tsirairay. Ny fomba mahazatra natsindra natsangana dia 10 mg isan'ora isan'andalana isan'andro ho an'ny 2 sy 4 andro voalohany, mitombo amin'ny 25 mg inefatra isan'andro ho an'ny ambiny ny herinandro voalohany.
Ho an'ny herinandro faharoa sy herinandro manaraka, hampitombo ny dosage amin'ny 50 mg inefatra isan'andro (hampitombo tsikelikely ny 10-25 mg / dose ny andro 2-5 isan'andro).
Ny dosa farafahakeliny isan'andro ampiasain'ny klinika dia 300 mg.
Ny tsy fahombiazan'ny fo:
Ny doka voalohan'ny fikarakarana ny fo dia ny 10 amin'ny 25 mg na 3 mankany amin'ny 4 isan'andro isan'andro.
Ny doka mahazatra dia 225 amin'ny 300 mg isan'andro ao 3 ka hatramin'ny 4 mizara dosie.
Ho an'ny fahasalaman'ny zaza ho an'ny zaza, ny dosie dia 0.5 mg / Kg IV isaky ny ora 4.
Ny fomba fiasan'ny Hydralazine HCL
Ny Hydralazine HCL dia ampiasaina mba hanaraha-maso ny fiakaran'ny tosi-drà (hypertension). Izy io koa dia ampiasaina mba hifehezana ny tosidra ambony amin'ny reny mandritra ny fitondrana vohoka (pre-eclampsia na eclampsia) na amin'ny toe-java-manahirana raha tena avo loatra ny tosidra (hypertensivecrisis).
Ny fiakaran'ny tosidra dia manampy amin'ny fiasan'ny fo sy ny arteria. Raha mitohy ela be izany, ny fo sy ny arteries dia mety tsy miasa tsara. Mety hanimba ny rà mandriaka ao amin'ny atidoha sy ny fo ary ny voa izany, ka miteraka fihenam-bidy, tsy fahombiazan'ny fo, na tsy fahampian'ny voa. Ny fampihenana ny fanerena ny tosidra dia mety hampitombo ny tahan'ny aretim-po sy ny tetika.
Ny hydrolazine hydrochloride dia miasa amin'ny fanalefahana ny fantson-dra ary mampitombo ny oxygène ao amin'ny fo ary mampihena ny asany.
Tsy tokony hampiasa an'io fanafody io ianao raha toa ka tsy mahazaka ny vovo-dronono Hydralazine, na raha misy aretim-bovoka ao amin'ny aronanao, na aretim-panafemana voan'ny fo miteraka.
Alohan'ny handraisana ny voly Hydralazine HCL, lazao amin'ny dokotera raha misy aretina amin'ny reninao, lupus, angina pectoris (fanaintainana tratra antsy tratra), na raha efa nisy fifandonana ianao.
Raha maka vinaingitra hydrolazine Hydralazine ianao, aza miala haingana loatra amin'ny toerana na toerana mipetraka, na mety ho malahelo. Mialà moramora ary miezaha mafy hisoroka ny fianjeranao.
Miantso ny dokotera avy hatrany raha toa ka misy fiantraikany goavana toy ny fifindran'ny fo na haingam-pandeha, ny fivoahana, ny fihenan-tsasatra na ny fifangaroana, ny arina maizin-doko, ny fanaintainan'ny areti-mifindra na ny fivoahana amin'ny tazo, ny fanaintainana tratra, ny fahalemena na ny reraka, na tsia.
Mba hahazoana antoka fa manampy ny fahasalamanao io ary tsy miteraka voka-dratsiny, dia mila mijery matetika ianao. Azonao atao koa ny mila fitsapana matetika. Aza adino ny fanendrena voatendry.
Tohizo hatrany ny pilina Hydralazine HCL araka ny torolàlana, na dia mahatsapa tsara aza ianao. Matetika ny fiakaran'ny tosi-tsakafo matetika dia tsy misy soritr'aretina, ka mety tsy ho fantatrao hoe avo be ny tosidranao. Tokony hampiasa ny fanafody fampidiran-dra ianao mandritra ny androm-piainanao.
Hydralazine hydrochloride Rohanpulver
Hydralazine hydrochloride volo Marketing
Manana fiantraikany mahatsiravina ny vovo-dronono hydralazine
Antsoy ny dokotera avy hatrany raha toa ka misy fiantraikany goavana toy ny:
mitebiteby eo amin'ny tarehinao, vavony, tanana, na tongotra;
fahanginana, fandoroana, fanaintainana, na fahatsapana hafahafa;
fahatsapana tahaka ny mety hivoahanao;
fisavoritahana, eritreritra na fihetsika mahazatra;
drizareo mampalahelo na sarotra;
fanasitranana ambany noho ny mahazatra na tsia; na
Mitebiteby na mitebiteby amin'ny tazo, fanaintainana tratra, fahalemena na reraka.
ny fihinanan-kanina, ny fery, ny fahaverezan'ny fiankohofana;
ririnina na dity nose; na
Mitefoka amin'ny fofona manitra na hoditra.
How to buy Hydralazine HCL from AASraw
Hydralazine HCL (304-20-1): Asa & Dosage & Side Effects
Hydralazine HCL (304-20-1) ampiasaina amin'ny fitsaboana ny tosidra ambony